Ntuziaka Conlọ ejikọtara: Ngwa kachasị mma | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | | Automlọ akpaaka, Home
Ọkụ bụ isi nkuku nke ụlọ ejikọrọ na mmalite maka ọtụtụ ndị ọrụ, agbanyeghị, ụlọ dị mma na-aga n'ihu, enwere ọtụtụ ngwaahịa, ee, ka ị na-aga n'ihu obere uwa a Ọ na-aghọwanye ihe mgbagwoju anya iji wụnye ngwaahịa ndị a ma mee ka ha rụọ ọrụ nke ọma. Anyị ewetara gị akụkụ ikpeazụ ma ọbụghị akụkụ nke Ntuziaka nelọ ejikọtara na anyị kere gị na Actualidad Gadget. Taa, anyị ga-ekwu maka ngwa ndị kachasị mma ịnweta ezigbo ụlọ nwere ọgụgụ isi n'ezie, ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a ị nwere ike ịmaghịdị mara.
1 Gara aga nsụgharị nke ejikọrọ Home Guide:
2 Ntugharị Smart
3 Ihe nkwakọ ngwaahịa Smart
4 Soundda smart
5 BroadLink: Jikwaa ngwaọrụ gị na ime
6 Smart thermostats
7 Smart blinds na shades
8 Smart agụụ cleaners
Gara aga nsụgharị nke ejikọrọ Home Guide:
Lighting - Ntuziaka 1 (njikọ)
Lighting - Ntuziaka 2 (njikọ)
Ntuziaka Conlọ ejikọtara: Otu esi edozi ọkụ gị
Anyị na-amalite site na ngwaahịa nke anaghị ekwukarị banyere ya, nke a bụ nke ndị ọkachamara ọkachamara na-ama nke a mana ndị ọrụ nkịtị anaghị ama ya. Anyị ejikọrọ na njikọta arụmọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ, dị ka ndị anyị nyochara ebe a, yana usoro nke WiFi nkwụnye ndị zoro n'azụ mgbidi na-enye anyị ohere ijikwa ike na-agafe na ha.
Smartzụta smart switches: Nyocha (njikọ)
Ndị a smart switches nwere ike ime ka ihe ọ bụla anyị jikwaa na a omenala n'ibu mgba ọkụ smart dị ka ọkụ, motorized blinds, ventilashion system and many more. Ọ bụ ụzọ dị ọnụ ala karịa smart bulbs n'ihi na ekwesighi edochi ha ogologo oge, ee, ha chọrọ nrụnye karịa na ihe ọmụma banyere ọkụ eletrik.
Ihe nkwakọ ngwaahịa Smart
Sockets bụ ngwa ngwa na ngwa ngwa ọzọ na smart switches. Ihe ntanetị ndị a na-egosipụta atụmatụ dị mfe ma chọọ nhazi obere. Enwere ọtụtụ ụdị, anyị dịka ọmụmaatụ anwalela ngwaahịa a site na ụdị Tecken na SPC. Ha bụ ihe ọzọ dị ọnụ ala ma nye anyị ohere ijikwa ngwa ọ bụla ejikọrọ na plọg ahụ iji gbanye ya ma gbanyụọ ya.
SPC Smart Plọg: Nyocha (njikọ)
Ha nwere ike ịnwe oke na ngwaahịa ndị ahụ nwere njikwa ma ọ bụ na-agbanye ma gbanyụọ na-akpaghị aka (ya bụ, ha nwere nguzo ọtọ), agbanyeghị, ha na-enye ezigbo nsonaazụ ya na igwe ọkụ eletrik na ngwaahịa ndị yiri ya. Ha na-enye anyị ohere ịmepụta usoro ihe omume, na-ahazi ntinye nke ugbu a yana ọbụlagodi iri oriri eletrik.
Banyere ụda na Actualidad Gadget ị nwere ọtụtụ nyocha nke ngwaahịa nke ụdị dị iche iche na-enye atụmatụ na mgbasa ozi na-adọrọ mmasị na nsonaazụ ọma. Ọ dị mkpa ka anyị tụlee ka ọtụtụ ndị enyemaka na-enyere aka mebere ha dakọtara tupu ịzụta ha. Anyi nwere otutu uzo ozo di na onu ahia di iche-iche, site na onu ala Energy Sistem rue uda zuru oke nke Sonos.
Anyị ga-enyocha mgbe niile ndakọrịta na Spotify Jikọọ ma ọ bụ ọrụ egwu egwu kachasị amasị anyị yana ohere nke ịgbakwunye ha na ọtụtụ igwe ma ọ bụ site na Amazon Alexa ma ọ bụ site na sistemụ arụmọrụ dị ka airplay 2, ya mere anyị nwere ike ịgbasa ngwaahịa ndị nke nta nke nta ma mepụta usoro egwu n'ụlọ nke dị mfe ịwụnye.
BroadLink: Jikwaa ngwaọrụ gị na ime
The "BroadLink" bụ ngwaọrụ ndị nwere infrared emitter / receiver, n'ụzọ bụ isi ulateomie ọrụ nke njikwa ọdịnala ọdịnala na nke a nwere ọtụtụ uru. Site na otu obere ngwaọrụ ndị a anyị ga-enwe ike ijikwa televishọn anyị, ntụ oyi, ikpo ọkụ na ọrịa strok. ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla nke nwere akara ntanetị ma dị n'ime nso nke BroadLink.
Ọ dị mkpa na Anyị ga-ejide n'aka mgbe ịzụrụ ya na ọ nwere protocol na-enye ya aha ya, yabụ na anyị nwere nchekwa data dị mkpa ma anyị na-ejide n'aka na njikwa ngwaọrụ anyị gụnyere ma n'ụzọ ahụ anyị nwere ike ijikwa ya. Ngwaahịa ndị a na-akwụkarị ụgwọ n'etiti euro 15 na 30 dabere na ikike, ogologo ọrụ na nha nke ngwaọrụ ahụ, n'onwe m na-akwado otu dị ka obere ka o kwere mee.
Igwe ihe omimi na-enye gị nnwere onwe dị egwu, mana nke a bụ nzọụkwụ karịrị ụlọ ejikọtara. Igwe mmiri ndị a ejikọtara na ndị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ndị na-anụ ọkụ ọkụ chọrọ nrụnye, ya mere, ana m akwado na maka usoro ndị a ị ga-abanye na onye nrụnye ikike. ma si otua zere ọgbaghara ọ bụla.
Honeywell Smart Thermostat: Nyocha (njikọ)
Brandsdị ndị a kacha mara amara nke ụdị ngwaahịa a bụ Elgato, Honeywell na Elago iji nye ihe atụ ole na ole. Ha bụ ngwaahịa dị oke ọnụ, mana na-eburu n'uche na ekele maka temometa ha, anyị ga-enwe ike ijikwa oriri nke ọkụ ọkụ ahụ n'ụzọ zuru oke, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị ga-enweta nchekwa na obere oge na ụgwọ ọrụ yana ya mere ọ ga-aba uru. Anyị nwere ike si otú jikwaa mgbe ọ na-atụgharị, mfe mmemme ntụ oyi na ịtụ gị mebere nnyemaaka na-etinye n'ụlọ gị na chọrọ okpomọkụ.
Smart blinds na shades
Anyị na-amalite site na smart blinds, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ngwaahịa na ahịa ọzọ maka usoro a nke ụlọ smart, anyị na-akwado ka ị họrọ maka onye nrụnye akwadoro. Tinyere ihe ndị ọzọ smart blinds na-aga na-achọ a ike ọkọnọ, moto echichi na ikekwe ọbụna masonry, Ya mere anaghị m akwado ya maka "amateurs". Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya, nhọrọ kachasị mma bụ ịrụ ụka adịghị ya ọkachamara.
N'aka nke ọzọ Ikea na-enye anyị ụzọ ọzọ dị ọnụ ala, na-enweghị echichi na karịa ndị nwere ọgụgụ isi, ọtụtụ ihe mkpuchi ya na ákwà mgbochi anaghị achọ ọkọnọ n'ihi na ha na-arụ ọrụ na batrị, Ha dakọtara na usoro Zigbee nke Tradfri ya na ọ na-eme ka ọtụtụ nha na agba dị iche iche, yabụ, ana m akwado na ọ bụrụ na ịchọghị ime ka echichi ụdị ngwaahịa a dị mgbagwoju anya, ị ga-abanye kpọmkwem na Kadrilj site IKEA n'ihi ịdị mfe ya na karịa ihe niile ọ dị mfe ịnweta ngwaahịa ndị a na etiti anyị kacha nso.
Smart agụụ cleaners
Ndị na-ehicha igwe na-ehicha robot abụwo akụkụ nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụlọ na afọ ndị na-adịbeghị anya, enweghị oge maka nhicha na umengwụ nke ihichapu emeela ka ha gbanwee ngwa ngwa. Mana ma eleghị anya ihe ị na-eburu n'uche mgbe ị zụtara robot bụ ma ọ gụnyere na ọ gụnyere ndakọrịta na ndị na-enyere aka mebere, anyị agbalịrị ọtụtụ n'ime ndị a site na ọkwa dịgasị iche iche.
Anyị na-akwado ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịnweta igwe mkpofu robot na ị ga-eburu n'uche ma ọ nwere nkwado nnyemaaka mebere ebe ị na-agwa ya: Alexa, gbanye agụụ na ịhụ ka ụdị robotic nke onye na-azụ achị si amalite ịza aza bụ ihe dị oke ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ntuziaka Conlọ Ejikọtara: Ngwa kachasị mma
Otu esi eme ka smartphone gị dọọ gị aka na ntị mgbe ị nọ 1 km si n'ụlọ